Maxey tahay ballanta la sheegay in Roman Abramovich uu ka qaaday Frank Lampard – Maxaase ka dhiman heshiiskiisa? – Gool FM
Maxey tahay ballanta la sheegay in Roman Abramovich uu ka qaaday Frank Lampard – Maxaase ka dhiman heshiiskiisa?
Abdirashid Mohamud June 26, 2019
(London) 26 June 2019. Kooxda Chelsea ayaa galeysa marxalad isbadal ah, waxaana la filayaa iney dib ugu soo celiyaan garoonka Stamford Bridge halyeeygooda Frank Lampard kaas oo hadda heshiis kula jira kooxda heerka labaad ee Derby County.
Xiddiga ugu goolasha badan taariikhda Blues, wuxuu qarka u saaran yahay inuu noqdo macalinka xiga ee kooxda kadib markii ay waayeen Maurizio Sarri oo dib ugu laabtay wadanka talyaaniga, iyadoo ay taasi jirto hadana waxaa lasoo warinayaa in Roman Abramovich uu ballan adag ka qaadayo Lampard.
Ballantu waxey tahay in Lampard lasiin doono hal fasal ciyaareed uu awoodiisa ku muujiyo, isla markaana aan muran la galin doonin shaqadiisa iyadoo la ogyahay iney kooxda xayiraad ka saaran tahay laba suuq iney wax dukaameysi ah sameyso.
41-jirkaan marka uu dib ugu soo laabto waxaa looga fadhiyaa inuu kooxda isbadal ku sameeyo iyadoo la ogyahay iney weysay xiddigoodii ugu fiicnaa (Eden Hazard) kaas oo 100 Malyan oo Yuuro ku aaday Real Madrid.
Telegraph ayaa qireysa in Lampard lasiin doono waqti uu awoodiisa ku muujiyo, saddex sano heshiis ah ayaa lasiin doonaa, waxeyna filashadu tahay in xilli ciyaareed dhameystiran aan lagu faragalin doonin hanaanka iyo maamulka kooxda.
Chelsea waxaa looga baahan yahay iney bixiso 4 Malyan oo Pound (magdhaw) ah taasoo ay ku qasban tahay iney siiso Derby Country, waxaana la ogyahay iney 5 Malyan oo Pound (magdhaw) ah ku heshay madaxa Maurizio Sarri oo ku biiray Juventus.
Jody Morris ayaa la filayaa inuu la shaqeeyo, mana la hubo shaqsiga Frank Lampard kala shaqeyn doono Stamford Bridge marba hadii lagu wareejiyo xukunka kooxda.
Talaadadii (shalay) ayey aheyd markii Derby County ay xaqiijisay iney Frank Lampard siisay fasax uu kula hadlo Blues, waxaana la rajeynayaa in isbuucaan gudahiisa lagu dhawaaqo heshiiska uu ku noqonayo tababaraha kooxda.
“Waxaan kubadda cagta kaga fariisan doonaa qaabkii Zinedine Zidane” - Thiago Silva
Elman Fc Vs Muqdisho City Club Kulanka Caasimada & Wax Waliba aad ugu baahan tahay kulankan